Truism ngowesifazane ngubani ukhulelwe - ukudla ilungelo nokuthola yonke amavithamini abalulekile kanye nezakhi ezidingekayo ukuze ngokugcwele ukuthuthukiswa -Natal wengane , bese wazalelwa naye. Enza isimangaliso esikulu kunazozonke Emhlabeni kudinga ukunakwa nokunakekela kusukela ngosuku lokuqala nje ebamba isisu. Yilokhu okufanele kungene imicabango kukamama esizayo, okuyinto Yiqiniso, kakade esikhathini okokuqala uthanda abese elindela ngomntanakhe.
Ngenxa yalesi umsebenzi obalulekile, kuhloswe Mother Nature, umama okhulelwe kufanele luphathwe inhlonipho siqaphelisise lokho kuyasiza ukuba ukukhulelwa ukuqinisekisa ukuthi zonke nascent ezidingekayo ekuphileni kwakhe. Ukuhambisana izincomo elula kuzosiza ukuvimbela zikhathi engafuneki ukuthuthukiswa umbungu.
Kubaluleke kakhulu uvithamini A, okuyinto stimulator weseli division nokukhula. Ngakho-ke kubalulekile ukuba usebenzise imikhiqizo ewusizo kwabesifazane abakhulelwe nalo Vitamin, efana neqanda isikhuphasha (hhayi ngaphezulu kuka-amaqanda 2 ngosuku - kuphela abilisiwe noma njengenhlangano omelet - kuba, ngaphezu kwalokho, iprotheni ephelele, futhi isethi ephelele cishe zonke izakhi mkhondo), abilisiwe ubisi, ephansi fat ukhilimu omuncu, ibhotela, imikhiqizo inyama - ikakhulukazi isibindi.
Kusukela lokho kuyasiza ukuba abesifazane abakhulelwe, ukunakekelwa okukhethekile kunikezwa Vitamin ukuzala, kuvusa ukuthuthukiswa umbungu futhi kuvimbele ukubeletha singakafiki isikhathi - vitamin E, it is zihilelekile ukumuncwa Vitamin A. Umthombo ke kukhona amafutha yemifino, amantongomane, amaqanda efanayo, okusabhontshisi, okusanhlamvu.
ukukhula Proper kanye nokuthuthukiswa amathambo namazinyo aqinile kunomthelela Vitamin C, ukusetshenziswa kwalo kuyadingeka nsuku zonke. Lapha basisize ocebile ezisawolintshi izithelo zabo (uma iguliswa kubo), zemifino salads, utamatisi, black currant, rose, anyanisi oluhlaza, bell pepper, ikiwi. Ngenxa Vitamin C kuqinisa futhi kuvusa izivikeli mzimba.
A izikhathi ezimbalwa ngesonto ekudleni kufanele kube izinhlanzi (mafutha) - kuyinto phosphorus, i-calcium - zokwakha ukuze uqwanga bone ingane. Futhi imikhiqizo ewusizo kakhulu kwabesifazane abakhulelwe - yobisi, kuyinto umphakeli enkulu ye-calcium - badinga adliwe nsuku zonke.
Okulandelayo ukuza imifino - kuba, ngaphezu kwakho konke, fibre, "ezinhle" carbohydrate, amaminerali. Plus Kusaphazwa amavithamini kanye acid organic. Manje ake sibone ukuthi yini izithelo ezinhle kwabesifazane abakhulelwe - cishe yonke, ngoba - isitoreji engokwemvelo amavithamini zemvelo, wezokudla fibre kanye acid organic. Umkhawulo kuphela, uma nomzimba ngoba kumuntu othize. Futhi uhlu okuyinto izithelo ziwusizo kwabesifazane abakhulelwe, kuyinto efiselekayo ukhawule ukusetshenziswa ezimbalwa ubhanana, amagilebhisi namakhiwane, njengoba equkethe okuningi carbohydrate. Futhi, kufanele uyeke izithelo ezingavamile, uma umama okhulelwe Akadli nabo indlela yezimpilo zabo. amajikijolo ewusizo kakhulu - strawberry, lingonberry, cranberry, cloudberry.
Iziphuzo, yebo, siqedwa ngokuphelele zonke utshwala, ngisho lotshwala encane. Imiphumela ye-ukusetshenziswa - izithelo iziphuzo, izithelo iziphuzo, jelly, lamanzi esiphethu ngaphandle igesi futhi kungaba kunalokho ebuthakathaka - ikhofi (akukho kuka 1 inkomishi), omnyama green tea.
Kubalulekile ukwazi ukuthi kuyasiza ukuba ne-abakhulelwe ezilwane? ibhotela kuphela futhi ghee premium. Ayikho amanoni imajarini - kuyinto kube yinto enqatshelwe. Futhi kubalulekile, kuyasiza ukuba abe ukhulelwe isilwane amaprotheni? Inyama mafutha, kuhlanganise yenkukhu. Qedela ukwenqaba ayi ozithandayo namasoseji zobudokotela, kusukela nomqwayiba, ukudla okusemathinini, lamakha ashisayo.
Nutrition kufanele kube ingxenyenamba, ngokuvamile, kodwa kancane ukuqinisekisa operation ntofontofo futhi abushelelezi umzimba, isisebenzi kule inkathi ebaluleke kakhulu yeminyaka umthwalo double.
Kwezinyanga ezimbalwa nje scrupulous indlela nokondleka kuzoqinisekisa ukuzalwa komntwana okunempilo futhi mncane umama osemncane.
Ukuhlukahlukana ezikhwama zepulasitiki
Atheroma: ekwelapheni amakhambi abantu esikhathini postoperative
I-Herpes emehlweni: ukwelashwa, izimbangela, imithi